भोलि देखि काठमाण्डौमा नयाँ नियम लागुहुदै, प्रसासन, प्रहरीले निकाल्यो आज यस्तो सूचना ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/भोलि देखि काठमाण्डौमा नयाँ नियम लागुहुदै, प्रसासन, प्रहरीले निकाल्यो आज यस्तो सूचना !
काठमाडौं- काठमाडौंमा सवारी साधन चलाउँदा भोलि (आइतबार)देखि ‘टाइम कार्ड’ लागू हुने भएको छ । उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, ट्राफिक प्रहरीलगायतका सरोकारवाला निकायहरूबीच भएको छलफलले सवारी सञ्चालनमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो । अब तोकेको समयमा मात्र चलाउन पाउने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । ढकालका अनुसार सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरू बिहान ९ बजेदेखि साढे १० बजेसम्म कार्यालय जान र बेलुका ५ बजेदेखि ६ बजेसम्म घर फर्कने समय तोकिएको छ ।
आइतबारबाट काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी कार्यालय सन्चालन हुने भएका छन् । लकडाउन जारी रहेको र कतिपय कर्मचारीहरु घर फर्किएकाले आंसिक कर्मचारीको सहयोगमा सरकारी कार्यालय सञ्चालन हुने भएको छ । सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरेपछि धेरैजसो सरकारी कार्यालयहरुको सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदै आएको छ । अधिकांश कर्मचारीहरु घरमै बसिरहेका छन् । बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले बढीमा एक चौथाइ कर्मचारीहरुमार्फत् सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेसँगै सरकारी कार्यालयहरुले आइतबारदेखि नियमित काममा हाजिर हुन आफ्ना कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
कोरोना कहरका कारण असार मसान्तमा तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा ब्याज अब एक वर्षसम्ममा तिर्न सकिने
साँगा नाकामा खटिएका ८ सशस्त्र प्रहरीमा कोरोना पुष्टि